SIDEE LOO ISTICMAALAA MADAXA Timaha Haddii aad isticmaaleysid curiyaha timaha dhaqameed, waa tan waxa la sameeyo. 1. Qabso qayb ka mid ah timaha. Abuur qayb ka mid ah timaha si aad u xoqdo. Qeyb yarta, curlku wuu adkeyaa. Markay sii weynaato qaybta, ayaa dabacsan curlku. 2. Meeshaada birta ah ku xir. Fur isku haynta ir ...
Isticmaalka • Waligaa ha taaban qalabka korontada marka gacmuhu qoyan yihiin cagtuna qaawan tahay. • Xiro kabo caag ah oo caag ah ama caag ah marka aad isticmaaleysid qalabka korontada, qaasatan haddii aad cagta marineysid dabaqyada shubka ah iyo marka aad banaanka joogto. • Waligaa ha u isticmaalin qalab cilladaysan ama gaboobay maadaama ay tani ...
Warshadaha Shiinaha ee qurxinta iyo qurxinta ayaa isu rogay warshad ku lug leh dhinacyo badan oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin timo jarista, quruxda soo jireenka ah, quruxda caafimaadka, waxbarashada iyo tababarka, suuqgeynta khadka tooska ah iyo qadka toosan iyo qeybaha kale ee kala duwan. Dhamaadka 2019, cabirka Shiinaha '...